Matthew Miller - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marijuana manana fahazoan-dàlana
Mpisolovava - New York & New Jersey
Matt dia manampy ny mpanjifany mandroso ny tanjon'ny orinasany amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo hamorona, hampivelatra ary hanararaotra ny portfolio'ny fananany ara-tsaina.
Mampiasa ny fahaizany amin'ny fanenjehana patanty anatiny sy iraisam-pirenena, Matt dia nahazo patanty amina sehatra teknika maro isan-karazany. Matt dia manana traikefa amin'ny fanampiana ny mpanjifany hitety ny rano manjavozavo misy patantin'ny rindrambaiko amerikana, indrindra eo amin'ny sehatry ny fianarana milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy. Izy koa dia manana traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa fanontana 3D, mpanakanto, mpitendry zavamaneno ary mpamorona avy amin'ny sehatra maro hafa.
Matt dia iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny lohahevitra vitsivitsy raha ny resaka fihaonan-kevitry ny fananana ara-tsaina, rongony ary hemp. Matetika i Matt dia niresaka tamin'ny fivoriamben'ny indostria toa ny NECANN sy CannaCon, ary anisan'ny tontolon'ny indostria tamin'ny hetsika fandraharahana hemp voalohany tao amin'ny oniversite Rutgers. Hatramin'ny nidirany tao amin'ny orinasa telo taona lasa izay, Matt dia nahazo mari-barotra federaly tamin'ny anaran'ny mpanjifany (raha mety) ao amin'ny sehatry ny rongony / hemp. Ankoatr'izay dia manohy mampianatra ny hafa ny amin'ny zavatra azo avela patanty izy, ny fomba ahazoana patanty, ny fomba fanaovana patanty hevitra, ary ny fizotry ny patanty ankapobeny ho an'ny hevitry ny olona sy ny famoronana azy fa tsy eny amin'ny habakabaky ny rongony fa manerana an'ireo indostria marobe.
Amin'ny maha mpisolovava patanty azy any New York sy New Jersey ary koa mpisolovava marika any New York sy New Jersey, dia nanohy nanitatra ny orinasany mpisolovava i Matthew Miller, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa tsy manerana ny firenena, fa manerana ny planeta .
Matt dia niresaka momba ny fananana ara-tsaina isan-karazany amin'ny hetsika indostrialy sy oniversite eo an-toerana, ao anatin'izany ny NECANN, CannaCon, Columbia University, The New School, Scarlet Startups, Hofstra University, JC Tech Meetup, NJ Grassroots, ary Hunter College. Matt dia mpandahateny mahazatra ihany koa amin'ny fifaninanana am-pitokisana, Startupalooza, ary nipoitra tamin'ny podcast marobe miresaka momba ny fananana ara-tsaina sy ny fandraharahana.
Mangataha hevitra amin'ny rongony miaraka amin'i Matthew
Jereo izay lazain'ny sasany amin'ireo mpanjifanay mahomby momba ny asantsika miaraka. Tena reharehako ny miantoka ny fenitra avo indrindra amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.